बाइबल पढेर पूरापूर लाभ उठाउनुहोस् | अध्ययन
“परमेश्वरको व्यवस्थामा म मनैदेखि साँच्चै आनन्द गर्छु।”—रोमी ७:२२.
यी प्रश्नहरूको जवाफ पत्ता लगाउनुहोस्:
“गुनगुनाउँदै” पढ्दा तपाईंले कस्तो लाभ उठाउनुहुनेछ?
अरूलाई मदत गर्नको लागि बाइबलका शब्दहरू सम्झन तपाईंलाई केले मदत गर्नेछ?
ध्यान दिएर बाइबल पढ्दा तपाईंले कसरी सुरक्षा पाउन सक्नुहुन्छ?
१-३. बाइबल पढ्दा अनि यसको शिक्षा लागू गर्दा कस्ता लाभहरू उठाउन सकिन्छ?
पाको उमेरकी एक बहिनीले यसो भनिन्‌, “बाइबलका कुराहरू बुझ्न मदत दिनुभएकोमा यहोवालाई हरेक बिहान धन्यवाद दिन्छु।” ती बहिनीले ४० भन्दा धेरै पटक पूरै बाइबल पढिसकिन्‌, अहिले पनि पढ्दै छिन्‌। अर्की एक जवान बहिनीले बाइबल पढाइले यहोवा वास्तविक हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न मदत गरेको कुरा लेखिन्‌। यहोवासितको उनको सम्बन्ध अझ घनिष्ठ भएको छ। उनी भन्छिन्‌, “म जीवनमा यत्ति धेरै खुसी कहिल्यै थिइनँ!”
२ प्रेषित पत्रुसले “परमेश्वरको वचनमा पाइने शुद्ध दूधको तिर्सना” गर्न सबैलाई प्रोत्साहन दिए। (१ पत्रु. २:२) बाइबलको अध्ययन गरेर त्यो तिर्सना मेटाउनेहरूले र यसको शिक्षा लागू गर्नेहरूले सफा अन्तस्करण र जीवनको उद्देश्य पाउँछन्‌। तिनीहरूले साँचो परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँको सेवा गर्नेहरूसित चिरस्थायी मित्रता गाँस्न सक्छन्‌। यी कुराहरू ‘परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्द गर्ने’ जायज कारण हुन्‌। (रोमी ७:२२) तर हामी अझ धेरै लाभ उठाउन सक्छौं। तीमध्ये केही विचार गरौं।
३ तपाईं यहोवा अनि उहाँको छोराबारे जति धेरै सिक्दै जानुहुन्छ, उहाँहरू अनि सँगी मानवप्रति तपाईंको प्रेम पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ। परमेश्वरले यस युगको विनाश गर्दा आज्ञाकारी मानिसहरूलाई कसरी बचाउनुहुनेछ भनेर बुझ्न बाइबलको सही ज्ञानले मदत गर्छ। तपाईंसित मानिसहरूलाई सुनाउने सुसमाचार छ। बाइबल पढेर बुझेका कुराहरू अरूलाई सिकाउँदा यहोवाले तपाईंलाई आशिष्‌ दिनुहुनेछ।
पढ्नुहोस् र मनन गर्नुहोस्
४. “गुनगुनाउँदै” बाइबल पढ्नुको अर्थ के हो?
४ यहोवा हामीले हतार-हतार गरेर बाइबल पढेको चाहनुहुन्न। उहाँले प्राचीन समयका यहोशूलाई भन्नुभयो: “व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओंठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैंले दिन-रात ध्यान गर्नू [“गुनगुनाउँदै पढ्नू,” NW]।” (यहो. १:८; भज. १:२, NW) के यसको मतलब उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म पढ्दा प्रत्येक शब्द सानो सोरमा पढ्नुपर्छ भन्ने हो? होइन। यसको अर्थ मनन गर्न सक्ने गतिमा पढ्नुपर्छ भन्ने हो। यसरी पढ्दा आफूलाई उपयोगी अनि प्रोत्साहनदायी लागेको भागमा ध्यान दिन सकिन्छ। त्यस्ता वाक्यांश, पद वा विवरण आउँदा बिस्तारै पढ्नुहोस्, सायद प्रत्येक शब्द गुनगुनाउँदै पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी पढ्दा ती कुराहरू तपाईंको मनमा ठप्प बस्नेछ। यसो गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ? किनभने परमेश्वरको सल्लाह राम्ररी बुझ्दा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न तपाईं उत्प्रेरित हुनुहुनेछ।
५-७. गुनगुनाउँदै बाइबल पढ्दा कसरी निम्न क्षेत्रमा मदत पुग्छ, उदाहरण दिनुहोस्: (क) नैतिक रूपमा स्वच्छ हुन; (ख) अरूप्रति धीरजी र दयालु हुन; (ग) कठिन परिस्थितिमा समेत यहोवामाथि भरोसा राख्न।
५ बुझ्न गाह्रो लाग्ने बाइबलका किताबहरू गुनगुनाउँदै पढ्नु मदतकारी हुन्छ। तीनवटा अवस्था कल्पना गर्नुहोस्। पहिलो अवस्था: एक जवान भाइको बाइबल पढाइ होशेको किताबमा पुगेको छ। अध्याय ४ को पद ११-१३ गुनगुनाउँदै पढेपछि तिनी रोकिन्छन्‌। (होशे ४:११-१३ पढ्नुहोस्) यी पदहरूले किन तिनको ध्यान खिच्छ? किनकि तिनी अनैतिक काम गर्ने दबाबविरुद्ध स्कूलमा सङ्घर्ष गर्दै छन्‌। तिनी ती पदहरूमा मनन गर्छन्‌ र आफैलाई यसो भन्छन्‌: ‘गोप्य रूपमा गर्ने कामसमेत यहोवाले देख्नुहुन्छ। म उहाँको चित्त दुखाउन चाहन्नँ।’ ती भाइ परमेश्वरसामु नैतिक रूपमा स्वच्छ रहने अठोट गर्छन्‌।
६ दोस्रो अवस्था: एक जना बहिनी योएलको किताब पढ्दै छिन्‌। तिनी अध्याय २ को पद १३ गुनगुनाउँदै पढ्छिन्‌। (योएल २:१३ पढ्नुहोस्) “अनुग्रही, दयामा भरपूर, रीस गर्नमा धीरजी र कृपामा भरिपूर्ण” परमेश्वर यहोवाको कसरी अनुकरण गर्न सकिन्छ भनेर तिनी मनन गर्छिन्‌। आफ्नो पति र अरूसित कहिलेकाहीं होच्याएर अनि रिसाएर कुरा गर्ने तिनको बानी छ। तिनी यस्तो बानी छोड्ने निर्णय गर्छिन्‌।
७ तेस्रो अवस्था: जागिर गुमाएकोले आफ्नी पत्नी र छोराछोरीलाई कसरी पाल्ने होला भनेर चिन्ता गरिरहेका बुबाको कल्पना गर्नुहोस्। यहोवा “उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूलाई . . . चिन्नुहुन्छ” र उहाँले “संकष्टको दिनमा बलियो किल्ला”-ले जस्तै सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने नहूम १:७ का शब्दहरू तिनी गुनगुनाउँदै पढ्छन्‌। यसबाट तिनले सान्त्वना पाउँछन्‌। तिनी यहोवाको मायालु हेरचाह महसुस गर्छन्‌ र अचाक्ली चिन्ता गर्न छोड्छन्‌। त्यसपछि गुनगुनाउँदै पद १५ पढ्छन्‌। (नहूम १:१५ पढ्नुहोस्) कठिन परिस्थितिमा पनि सुसमाचार प्रचार गर्दा यहोवालाई आफ्नो बलियो किल्ला बनाएको देखाउन सकिन्छ भनी तिनी महसुस गर्छन्‌। त्यसैले नयाँ काम खोज्दै हप्ताको बीच-बीचमा क्षेत्र सेवामा भाग लिन पनि उत्प्रेरित हुन्छन्‌।
८. बाइबल पढ्दा भेट्टाएको बहुमूल्य कुरा छोटकरीमा बताउनुहोस्।
८ भर्खरै छलफल गरिएका लाभदायी कुराहरू कसै-कसैलाई बुझ्न गाह्रो लाग्ने बाइबल किताबहरूबाट लिइएका हुन्‌। सिक्ने इच्छासहित होशे, योएल र नहूमका केही पद जाँच्दा तपाईं यी किताबका अन्य पद पनि गुनगुनाउँदै पढ्न उत्सुक हुनुहुनेछ। यी किताबबाट तपाईं कति धेरै बुद्धि र सान्त्वना पाउन सक्नुहुन्छ, कल्पना गर्नुहोस् त! अनि बाइबलका अरू किताबबारे के भन्न सकिन्छ? परमेश्वरको वचन हीरा खानीजस्तै हो। त्यस खानीलाई राम्ररी खन्नुहोस्। हीरारूपी ईश्वरीय निर्देशन र प्रोत्साहन पाउने लक्ष्यसहित पूरै बाइबल पढ्नुहोस्।
बुझ्न कडा मेहनत गर्नुहोस्
९. बाइबलका कुराहरू हामी कसरी अझ राम्ररी बुझ्न सक्छौं?
९ बाइबलको केही अंश दिनदिनै पढ्नु महत्त्वपूर्ण छ। तर पढेको कुरा बुझ्नु पनि आवश्यक छ। त्यसैले जुन मानिस, ठाउँ र विवरणबारे पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसबारे अझ धेरै कुरा थाह पाउन हाम्रा प्रकाशनहरू प्रयोग गर्नुहोस्। बाइबलको कुनै शिक्षालाई कसरी लागू गर्ने भनेर अलमलमा पर्नुभएको छ भने मण्डलीको एल्डर वा अरू परिपक्व ख्रीष्टियनको मदत माग्न सक्नुहुन्छ। बाइबलका कुराहरू अझ सही तरिकामा बुझ्न कडा मेहनत गर्नुपर्ने कुरा प्रथम शताब्दीका अपोल्लसको उदाहरणले कसरी प्रस्ट पार्छ, विचार गरौं।
१०, ११. (क) सुसमाचारको प्रचारकको रूपमा प्रगति गर्न अपोल्लसले कस्तो मदत पाए? (ख) अपोल्लसको उदाहरणबाट हामी कस्तो पाठ सिक्न सक्छौं? (“के तपाईंको शिक्षा नयाँ बुझाइमा आधारित छ?” भन्ने पेटी हेर्नुहोस्।)
१० अपोल्लस “धर्मशास्त्रमा पोख्त” अनि “पवित्र शक्तिले भरिएर जोसिलो” भएका यहूदी ख्रीष्टियन थिए। प्रेषितको किताबमा तिनीबारे यस्तो लेखिएको छ: “[तिनी] येशूको विषयमा ठीक-ठीक कुरा बोल्ने र सिकाउने गर्थे तर तिनलाई यूहन्नाले प्रचार गरेको बप्तिस्माको विषयमा मात्र थाह थियो।” अपोल्लसले अनजानमै बप्तिस्माबारे पुरानो बुझाइ सिकाइरहेका थिए। तिनले एफिससमा सिकाइरहेको प्रिस्किला र अक्वीला नाम गरेका ख्रीष्टियन दम्पतीले सुने। त्यसपछि उनीहरूले तिनलाई “परमेश्वरको मार्गबारे अझ सही तरिकामा” व्याख्या गरिदिए। (प्रेषि. १८:२४-२६) अपोल्लसले यसबाट कस्तो लाभ उठाए?
११ एफिससमा प्रचार गरिसकेपछि अपोल्लस अखैयातिर लागे। “त्यहाँ पुगेपछि, परमेश्वरको असीम अनुग्रहले गर्दा विश्वास गरेकाहरूलाई तिनले धेरै मदत गरे, किनकि यहूदीहरू गलत हुन्‌ भनी तिनले साहसी भई खुलेआम प्रमाण दिए अनि येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर धर्मशास्त्रबाट देखाए।” (प्रेषि. १८:२७, २८) अब भने अपोल्लसले ख्रीष्टियन बप्तिस्माबारे सही व्याख्या गर्न सक्थे। यस्तो बुझाइले गर्दा तिनले नयाँ व्यक्तिहरूलाई साँचो उपासनामा प्रगति गर्न “धेरै मदत” गरे। यस विवरणबाट हामी के सिक्न सक्छौं? अपोल्लसले जस्तै हामीले पनि बाइबलको कुरा बुझ्न कडा मेहनत गर्नुपर्छ। तर अझ प्रभावकारी तरिकामा कसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर अनुभवी सँगी विश्वासीले सुझाव दिंदा नम्र अनि कृतज्ञ भई स्वीकार्न पनि चाहन्छौं। यसो गर्दा हाम्रो पवित्र सेवाको गुणस्तर बढ्नेछ।
आफूले सिकेको कुरा अरूलाई मदत गर्न प्रयोग गर्नुहोस्
१२, १३. कौशलतासाथ बाइबल प्रयोग गर्दै विद्यार्थीलाई प्रगति गर्न कसरी मदत दिन सकिन्छ, उदाहरण दिनुहोस्।
१२ प्रिस्किला, अक्वीला र अपोल्लसजस्तै हामी पनि अरूको लागि आशिष्‌ साबित हुन सक्छौं। जिज्ञासु व्यक्तिले तपाईंको प्रोत्साहन पाएर जीवनमा परिवर्तन गर्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? अथवा एल्डरको रूपमा तपाईंले समस्यामा परेका भाइ वा बहिनीलाई धर्मशास्त्रीय सल्लाह दिनुभयो। त्यसबाट मदत पाएकोमा तिनले धन्यवाद दिंदा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? बाइबल प्रयोग गर्दै अरूलाई जीवनमा परिवर्तन गर्न मदत दिंदा हामी साँचो सन्तुष्टि र आनन्द पाउँछौं। * अरूलाई मदत दिन हामी कसरी बाइबल प्रयोग गर्न सक्छौं?
१३ साँचो उपासनाको पक्ष लिने कि झूटो उपासनाको भन्ने सम्बन्धमा एलीशाको समयका थुप्रै इस्राएली कुनै निर्णय नगरी बसेका थिए। एलीशाले ती इस्राएलीहरूलाई दिएको सल्लाहले प्रगति गर्नदेखि पछि सरिरहेका बाइबल विद्यार्थीलाई मदत गर्न सक्छ। (१ राजा १८:२१ पढ्नुहोस्) अर्को अवस्था विचार गर्नुहोस्: कुनै जिज्ञासु व्यक्ति आफ्नो परिवार वा साथीसँगीले के भन्लान्‌ भनेर डराइरहेका छन्‌। यहोवाको उपासना गर्ने तिनको सङ्कल्पलाई बलियो बनाउन यशैया ५१:१२, १३ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।—पढ्नुहोस्।
१४. अरूलाई मदत गर्नको लागि बाइबलका शब्दहरू सम्झन तपाईंलाई केले मदत गर्नेछ?
१४ बाइबलमा प्रोत्साहन दिने, सच्याउने र बल दिने थुप्रै शब्द पाउँछौं। तर तपाईं भन्नुहोला, ‘चाहिएकै बाइबल पद कसरी भेट्टाउने?’ दिनदिनै बाइबल पढ्नुहोस् र मनन गर्नुहोस्। यसरी तपाईं बाइबलसित अझ परिचित हुँदै जानुहुनेछ अनि यहोवाको पवित्र शक्तिले तपाईंलाई बाइबलका शब्दहरू सम्झन मदत गर्नेछ।—मर्कू. १३:११; यूहन्ना १४:२६ पढ्नुहोस्। *
१५. बाइबल राम्ररी बुझ्न तपाईंलाई केले मदत गर्नेछ?
१५ ईश्वरतान्त्रिक जिम्मेवारी पूरा गर्न राजा सुलेमानले जस्तै यहोवासित बुद्धि माग्नुहोस्। (२ इति. १:७-१०) यहोवा र उहाँको इच्छाबारे सही ज्ञान पाउन प्राचीन समयका भविष्यवक्ताहरूले जस्तै परमेश्वरको वचनबारे “लगनशील भई सोधपुछ गर्नुका साथै होसियार भई खोजतलास” गर्नुहोस्। (१ पत्रु. १:१०-१२) प्रेषित पावलले तिमोथीलाई “विश्वासका वचनहरूबाट र असल शिक्षाबाट” पोषण लिन प्रोत्साहन दिए। (१ तिमो. ४:६) यसरी पोषण लिनुभयो भने तपाईंले पनि अरूलाई मदत गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईंको विश्वास पनि बलियो हुनेछ।
बाइबल पढाइले सुरक्षा दिन्छ
१६. (क) ‘होसियारीसाथ दिनहुँ धर्मशास्त्र जाँच्दा’ बिरियाका यहूदीहरूले कस्तो लाभ उठाए? (ख) दिनदिनै बाइबल पढ्नु हाम्रो लागि किन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ?
१६ बिरियाका यहूदीहरू “होसियारीसाथ दिनहुँ धर्मशास्त्र जाँच्थे।” पावलले ती यहूदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदा तिनीहरूले उनको कुरा धर्मशास्त्रसित मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर तुलना गरे। फलस्वरूप पावलले सिकाएको कुरा सत्य हो भनेर थुप्रै यहूदीले विश्वास गरे र तिनीहरू “येशूका अनुयायी बने।” (प्रेषि. १७:१०-१२) दिनदिनै बाइबल पढ्दा यहोवामाथिको हाम्रो विश्वास बलियो हुन्छ भनेर यस विवरणबाट सिक्न सक्छौं। नयाँ संसारमा बाँच्न चाहन्छौं भने बलियो विश्वास हुनै पर्छ अर्थात्‌ ‘आशा गरिएका कुराहरू पक्कै पूरा हुनेछन्‌ भनेर पर्खनै पर्छ।’—हिब्रू ११:१.
१७, १८. (क) बलियो विश्वास र प्रगाढ प्रेमले ख्रीष्टियनहरूको हृदयलाई कसरी सुरक्षित राख्छ? (ख) आशाले हामीलाई कसरी जोगाउँछ?
१७ हामीलाई विश्वास, प्रेम र आशा चाहिन्छ भनेर पावलले बताए। तिनले भने: “हामीचाहिं दिनका हौं; त्यसैले आओ, हामी सचेत रहौं अनि विश्वास र प्रेमको कवच अनि उद्धारको आशाको टोप लगाऔं।” (१ थिस्स. ५:८) शत्रुको आक्रमणदेखि आफ्नो मुटु जोगाउन सिपाहीहरूले कवच लगाउँथे। त्यसैगरि हामीले पनि आफ्नो हृदयलाई पापी झुकावदेखि सुरक्षित राख्नुपर्छ। कुनै ख्रीष्टियनले परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमाथि बलियो विश्वास राख्दा अनि परमेश्वर तथा मानिसहरूलाई प्रगाढ प्रेम गर्दा उसको हृदय सुरक्षित हुन्छ। उसले परमेश्वरको अनुमोदन पाइरहन सकेजति सबै गर्छ।
१८ पावलले टोप अर्थात्‌ “उद्धारको आशा”-बारे पनि बताए। आफ्नो टाउको नजोगाउने सिपाहीले सजिलै ज्यान गुमाउन सक्थ्यो। तर टोप लगाउने सिपाही भने टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्नदेखि बच्न सक्थ्यो। यहोवाले बचाउनुहुनेछ भन्ने आशालाई अझ बलियो बनाउन बाइबलको अध्ययनले मदत गर्छ। बलियो आशाले हामीलाई धर्मत्यागीहरू र सइनजस्तै फैलने तिनीहरूका “खोक्रा बोलीहरू”-को प्रतिरोध गर्न सक्षम बनाउँछ। (२ तिमो. २:१६-१९) साथै कसैले यहोवालाई मन नपर्ने काम गर्न उक्साउँदा ‘नाइँ’ भन्न पनि हाम्रो आशाले बल दिनेछ।
बाइबल पढाइ उद्धारको लागि अत्यावश्यक
१९, २०. हामी किन परमेश्वरको वचनको धेरै कदर गर्छौं? उहाँको वचनप्रति कृतज्ञ भएको हामी कसरी देखाउँछौं? (“यहोवाले मलाई चाहिएकै कुरा दिनुभएको छ!” भन्ने पेटी हेर्नुहोस्।)
१९ यस युगको अन्त जति नजिकिंदै छ, यहोवाको वचनमाथि भर पर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै बढ्दै छ। बाइबलको सल्लाहले खराब आनीबानी त्याग्न र पापी झुकावविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न मदत दिन्छ। बाइबलमा पाइने प्रोत्साहन र सान्त्वनाले सैतान र त्यसको संसारले ल्याउने जुनसुकै परीक्षा सामना गर्न मदत गर्छ। यहोवाको वचनमा पाइने निर्देशनहरूले जीवनको बाटोमा हिंडिरहन मदत गर्छ।
२० परमेश्वर “सबै किसिमका मानिसहरूले उद्धार पाऊन्‌” भन्ने चाहनुहुन्छ। “सबै किसिमका मानिसहरू”-मा यहोवाका सेवकहरू अनि हामीले सुसमाचार सुनाउँदा सुन्न र सिक्न इच्छुक मानिसहरू पर्छन्‌। तर उद्धार पाउन चाहने सबैले “सत्यको सही ज्ञान” लिनै पर्छ। (१ तिमो. २:४) यसको लागि बाइबल पढ्नै पर्छ र त्यसका निर्देशनहरू लागू गर्नै पर्छ। दिनदिनै बाइबल पढ्दा हामी यहोवाको अमूल्य वचनको धेरै कदर गर्छौं भनेर देखाइरहेका हुन्छौं।—यूह. १७:१७.
^ अनु. 12 हामी अरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि दबाब दिन अथवा अरूको दोष देखाउन बाइबल प्रयोग गर्दैनौं। यहोवा हामीसित धीरजी अनि दयालु व्यवहार गर्नुहुन्छ; हामीले पनि बाइबल विद्यार्थीसित त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ।—भज. १०३:८.
^ अनु. 14 आफूलाई चाहिएको बाइबल पदका शब्दहरू मात्र याद छ तर बाइबलको किताब, अध्याय अनि पद याद छैन भने के गर्ने? बाइबलको अन्ततिर भएको सूची, यहोवाका साक्षीहरूको पुस्तकालय (अङ्ग्रेजी) अथवा नयाँ संसार अनुवाद-को बृहत्‌ अनुक्रमणिका (अङ्ग्रेजी) हेरेर शास्त्रपद भेट्टाउन सक्नुहुन्छ।
के तपाईंको शिक्षा नयाँ बुझाइमा आधारित छ?
प्रचारकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अपोल्लसले मदत पाए
अरूलाई सही ज्ञान बाँड्न हामी बाइबल सत्यबारे नयाँ जानकारी लिइ-रहन चाहन्छौं। यो कुरा मनमा राख्दै तल दिइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:
येशूले मत्ती २४:३४ मा उल्लेख गर्नुभएको “पुस्ता”-ले कसलाई बुझाउँछ?—प्रहरीधरहरा, अप्रिल १, २०१०, पृष्ठ २०-२१.
मत्ती २५:३२ मा बताइएको ‘बाख्राहरूबाट भेडाहरू छुट्टयाउने’ काम कहिले हुन्छ?—प्रहरीधरहरा, अक्टोबर १५, १९९५, पृष्ठ २१-२३.
लूका २१:२६ मा बताइएझैं “पृथ्वीमाथि आइपर्ने कुराहरूको डर र आशङ्काले गर्दा मानिसहरू” कहिले “मूर्च्छा पर्नेछन्‌?”—प्रहरीधरहरा, फेब्रुअरी १, १९९४, पृष्ठ २९-३०.
दिनहुँ बाइबल पढ्दा र ध्यान दिएर अध्ययन गर्दा झन्‌-झनै चहकिलो हुँदै गइरहेको यहोवाको वचन बुझ्न हामी अरूलाई मदत गर्न सक्नेछौं।—हितो. ४:१८.
“यहोवाले मलाई चाहिएकै कुरा दिनुभएको छ!”
एक जवान बहिनीले यस्तो लेखिन्‌: “यहोवाले हामीलाई थुप्रै मायालु सम्झौटा दिनुभएको छ। तर दिनहुँ बाइबल पढ्ने सन्दर्भमा उहाँले दिनुभएको सम्झौटाले मेरो जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। मैले हाई-स्कूलको अन्तिम वर्षदेखि बाइबल पढ्न सुरु गरें। पूरै बाइबल पढ्न दुई वर्षजति लाग्यो। आफ्नो जीवन केमा लगाउने भनेर निर्णय गर्न चाहिने सबै कुरा यहोवाको वचनमा पाएँ। अहिले म दोस्रो चोटि पढ्दै छु। तर पहिला कहिल्यै नपढेको कुरा पढिरहेको जस्तो लाग्छ। पहिलो चोटि बाइबल पढ्दा जत्ति रमाइलो लागेको थियो, अहिले पनि त्यत्तिकै रमाइलो लाग्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा पहिलेभन्दा झनै रमाइलो लागिरहेको छ! अचम्मै लाग्छ, यहोवाले मलाई चाहिएकै कुरा दिनुभएको छ!”